Barashada Fogaanta 2.0 / Barashada Guriga 2.0
Barashada Guriga 2.0
Barashada Fogaanta waa qaab wax lagu barto oo wax lagu baro kaas oo sharaxaada, aaladaha koorsada iyo qiimeynta lagu qabto onlaynka. Qorshahan, si loo hubiyo caafimaadka iyo saxada, ma jiraan arday ama qoysas imaan kara dhismayaasha iskuulka inta lagu jiro barashada guriga; halka ardaydu ay ku qaadayaan dhammaan waxbarashada koorsada iyada oo loo marayo Seesaw ama Schoology oo ay maalin walba la falgalaan macallimiintooda shatiga leh wakhti isku mid ah ama kala duwan. Iskuulada aagga St.Cloud waxay horumariyeen noocyada barashada guriga laga soo bilaabo isbiriin la soo dhaafay iyadoo lagu saleynayo jawaab celinta qoysaska, ardayda, iyo shaqaalaha. Waxaan uu yeeraynaa qaabkan barashada Barashada Guriga 2.0.
Macluumaadka Xanaanada Caruurta ee Barashada Guriga 2.0
Marka loo baahdo barashada guriga iyada oo ay ugu wacan tahay welwelka caafimaadka iyo saxada, ardayda barnaamijyada xanaanada waxaa laga filayaa inay raacaan jadwalka maalinlaha ay usoo gudbiyaan macalinmiintooda. Ardaydu waxay wax ku baran doonaan siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin xiriirka tooska ah ee macallimiintooda Google Meet, iyada oo loo marayo waxqabadyada laga bixiyo Seesaw iyo ka qayb qaadashada howlaha waraaqaha / qalinka. Ardaydu waa inay ka rajeeyaan inay ka helaan barasho toos ah macallimiinta fasalka ugu yaraan hal mar maalintii, oo ay weheliyaan kulanka tooska ah ee Google ee Talaadada. Xaadiriska waxaa laqaban doonaa inta lagu gudajiro kulanka tooska ah ee Google iyo iyadoo loo dhameynayo howlaha waxbarida ee Seesaw. Degmada 742 waxaa ka go'an inay siiso ardayda maalin walba xiriir aragti, bulsheed iyo shucuur waxayna siin doontaa tan inta lagu jiro Kulamada Google ee fasalka tooska ah. Ardayda waxaa laga filayaa inay ku mashquulaan dhammaan hawlaha waxbarashada.
Macluumaadka K-5 ee Barashada Gurga 2.0
Marka loo baahdo barashada guriga iyada oo ay ugu wacan tahay walaac caafimaadka iyo mid saxada darteed, ardayda dhigata fasallada K-5 waxaa laga filayaa inay raacaan jadwalka maalinlaha ay siiyaan macalinmiintooda. Ardaydu waxay wax ku baran doonaan siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin xiriirka tooska ah ee macallimiintooda Google Meet, iyada oo loo marayo waxqabadyada laga bixiyo Seesaw iyo ka qayb qaadashada howlaha waraaqaha / qalinka. Ardaydu waa inay filaan inay ka helaan sharaax toos ah macallimiinta fasalka ugu yaraan laba jeer maalintii, oo ay weheliyaan sharaxaad tooska ah oo dheeraad ah waqti ka waqti oo ka imaanaya macallimiin takhasus gaar ah leh. Waa la is xaadirin doonaa inta lagu gudajiro fadhiga ugu horeeya ee maalinta. Degmada 742 waxaa ka go'an inay siiso ardayda maalin walba xiriir aragti, bulsheed iyo shucuur waxayna sii wadi doontaa tan iyo inta lagu jiro Kulamada Google ee fasalka tooska ah. Ardayda waxaa laga filayaa inay ku mashquulaan dhamaan hawlaha waxbarashada ayna xaadir ahaadaan bilowga maalin walba.
Heerarka gudbinta ee 'COVID-19' ayaa ku sii kordhaya bulshadeena. Khubarada caafimaadka ee deegaanka iyo saraakiisha Degmada Stearns ayaa sheegaya inuu kororka sii soconaya toddobaadyada soo socda. Marka heerarka kiisku ka sarreeyaan 50, Qorshaha Badbaadada Badhasaabka Gobolka wuxuu u baahan yahay inaan tixgelinno saameynta COVID ku leedahay beesheena iyo dugsiyadeenna, talooyinka saraakiisha caafimaadka bulshada ee deegaanka iyo bulshada caafimaadka, iyo caqabadaha hawlgalka ee sii kordhaya tirada ardayda iyo shaqaalaha ku jira karantiil. Dhamaystirka falanqeyntan iyagoo la tashanaya saraakiisheenna caafimaadka ee Aagga Degmada St. Cloud wuxuu u gudbayaa waxbarashada guriga ee ardayda dugsiga xanaanada, hoose iyo barnaamijyada doorashada ah bisha Noofambar 30. Ardayda dugsiga sare ee degmada waxay hadda ku jiraan qaabka barashada guriga.
Macluumaadka 6-12 ee Barashada Guriga 2.0
Marka loo baahdo barashada guriga iyada oo ay ugu wacan tahay walaac xagga caafimaadka iyo saxada, ardayda dhigata fasalada 6-12 waxaa laga filayaa inay raacaan isla jadwalka sida ay caadi ahaan ugu xaadiri jiraan dhismayaasha iskuulka. Ardaydu waxay gali doonaan Schoology iyo Google Meet bilowga xilli kasta oo fasal jiro si ay ula kulmaan si fool ka fool ah macallimiintooda iyo ardayda ay isku fasalka yihiin. Waxaa laga yaabaa in lagu amro inay ku sii jiraan khadka tooska ah inta ay ku jiraan muddadaas fasalka ama ay iskaashi la yeeshaan kooxo yar yar ama ay si shaqsiyan ah u shaqeeyaan. Muddo xaadirin ah ayaa laqaban doonaa, ardaydana waxaa lagafilayaa inay soo xaadiraan waqtiga lamudeeyay oo ay soo galaan fasal kasta. Macalimiintu waxay bilaabi doonaan casharadooda iyagoo adeegsanaya Google Meet markasta oo ay macquul tahay. Isku xirnaanshaha aragga, bulshada, iyo shucuurta ardaydeena inta lagu guda jiro barashada guriga waa mid muhiim ah kulanka onlaynka waa mid ka mid ah qalabkeena ugu fudud uguna waxtarka badan
Kulankii Guddiga Waxbarashada ee 7dii Oktoobar, Kormeeraha guud Jett wuxuu la wadaagay in mas'uuliyiinta degmada ay saadaalinayaan tirakoobka kiiska COVID ee ka badan 30. Iyadoo la raacayo Qorshaha Badbaadada Barashada Gudoomiyaha, heerka kiiskani wuxuu u baahan yahay Aagga Iskuulada St. Cloud inay u wareegaan qaabka waxbarashada guriga fasalada 6-12 ee Kennedy, North, South, Apollo, McKinley iyo Tech. Waxaan u bilaabi doonnaa Barashada guriga ee iskuuladaan Isniinta, Oktoobar 19, waxayna ku sii jiri doonaan qaabka barashada guriga illaa xogta caafimaadka ee degmadu hoos u dhacdo oo ay ka hooseyso 30 ugu yaraan saddex toddobaad oo isku xigta. Sida uu oggol yahay Qorshaha Badbaadada Barashada, waxaan u isticmaali doonnaa Arbacada, Oktoobar 14 maalin ku-meelgaar ah shaqaalaheena sare inay u diyaargaroobaan qaabkan waxbarasho ee cusub. Maalinntaan, ma jirto wax baris cusub oo dhici doonta oo ardaydeenu waxay u isticmaali karaan maalintaani inay ku dhammaystiraan laylisyada ama hawlaha, laakiin uma baahna inay galaan Schoology. Dhammaan ardayda ka diiwaangashan barnaamijyada waxbarashada gaarka ah ee Riverwoods, Roosevelt Education Center, Clara’s House, Journey, 180 Group Home, InStep, CO2 iyo Recovery Plus shaqsi ahaan ayey uxaadiri doonaan, iyagoo raacaya jadwalkooda hadda ay haystaan. Ardayda ka diiwaangashan fasallada Pre-K-5 iyo Akadamiyadda Barashada Guriga ma ay saameeynayso kala wareegaan.